आइतबार नोभेम्बर 25, 2021 |
आइतबार नोभेम्बर 25, 2021
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: फिलिप्पी4: 4
“"सँधै प्रभुमा आनन्द गर, म दोहोर्याउँछु आनन्दित होऊ।"”
उत्तरदायी पढाइ: फिलिप्पी4: 6-8, 10, 11, 13
6 कुनै कुराको फिक्री नगर। बरु चाहिएको हरेक कुराकोलागि परमेश्वरलाई अन्तरबिन्ती र प्रार्थना गर। अनि प्रार्थना गर्दा परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ।
7 परमेश्वरले दिएको शान्तिले तिमीहरूको मन र हृदयलाई येशू ख्रीष्टमा सुरक्षीत राख्नेछ। शान्ति जो परमेश्वरले दिन्छन्, यति महान हुन्छ कि हामी बुझ्न सक्दैनौं।
8 दाज्यू-भाइहरू र दिदी-बहिनीहरू हो, जुन-जुन कुराहरू अति राम्रा र प्रशंसा गर्न लायकका छन् त्यसै बारे सोच। जुन-जुन कुराहरू सत्य र माननीय पवित्र र उचित, सुन्दर र आर्कषणीय छन् तिनैको मात्र विचार गर।
10 प्रभुमा म खुबै प्रसन्न छु कि।
11 म यी कुराहरू गर्दैछु, तर मैले भन्नुको अर्थ यो होइन कि मलाई केही कुराको आवश्यक छ। मैले त आफूसित जो छ त्यसैमा सन्तोष गर्न प्रशिक्षण लिएको छु।
13 म सब कुराहरू गर्न समर्थ छु किनभने ख्रीष्टले मलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ।
1. भजनसंग्रह 16: 5, 6, 8, 9, 11
5 अहँ, मेरो हिस्सा र मेरो कचौरा परमप्रभुबाट नै कपादान हुन्छ। हे परमप्रभु, तपाईं मेरो सहारा हुनुहुन्छ, तपाईंले मेरो भाग प्रदान गर्नुहुन्छ।
6 मेरो भाग आश्चर्यपूर्ण छ, मेरो उत्तराधिकार अति सुन्दर छ।
8 परमप्रभुलाई मैले सधैं आफू समक्ष राखेको छु र म उहाँको दाहिने तिरबाट कहिल्यै सर्ने छुइनँ।
9 मेरो हृदय र आत्मा यसैले आनन्दित हुनेछ। अनि मेरो शरीर पनि सुरक्षित रहनेछ।
11 तपाईं मलाई बाँच्ने सही बाटो सिकाउनु हुनेछ। तपाईंसँग हुँदा सम्पूर्ण खुशी प्राप्त हुनेछ। तपाईको दाहिनेपट्टि हुँदा सघैं खुशी प्राप्त हुनेछ।
2. यशैया 65: 18 (हुन), 19, 23, 24
18 मेरा मानिसहरू खुशी हुनेछन्। तिनीहरू सदा सर्वदा आनन्दित हुनेछन् किन? किनभने म नै बनाउनेछु, म यरूशलेमलाई आनन्दले भरिपूर्ण बनाउने छु अनि म तिनीहरूलाई आनन्दित मानिसहरू बनाउनेछु।
19 तब म यरूशलेमसँग आनन्दित हुनेछु। म मेरा मानिसहरूसँग खुशी हुनेछु। त्यहाँ फेरि कहिल्यै पनि कोलाहल, र कष्ट हुनेछैन्।
23 स्त्रीहरू मरेका नानी जन्माउनका लागि कहिल्ये पनि फेरि कष्ट गर्ने छैनन्। स्त्रीहरू नानी जन्माउने बेलामा के कस्तो घटना होला भनेर डराउने छैनन्। सारा मेरा मानिसहरू र उनीहरूका बालकहरू परमप्रभुकै आशिष परेका हुनेछन्।
24 तिनीहरूले भन्नु अघि नै म तिनीहरूको खाँचो के छ जान्दछु। अनि तिनीहरूले आफ्नो दावी राख्न अघि नै म तिनीहरूलाई सहायता गर्नेछु।
3. प्रेरित 16 : 16 (एक निश्चित), 17 (से 1st ,), 18 (पल) (तिर 1st .), 19 (तिर 2nd ,), 20, 22 (र मजिस्ट्रेटहरू), 23, 25-32, 33 (र थियो), 34 (र खुसी भयो)
16 ...एउटी नोकर्नी केटीले हामीलाई भेटी। उभित्र एउटा खास आत्मा थियो। त्यस आत्माले उसलाई भविष्यमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा बताउने शक्ति दियो। त्यसो गरेर त्यस नोकर्नीले आफ्नो मालिकहरूको निम्ति धेरै पैसा कमाउने गर्थी।
17 त्यस केटीले पावल र हामीलाई पछ्याई। त्यो चिच्याई अनि भनी, यी मानिसहरू एकदमै सर्वोच्च परमेश्वरको दास हुन्! तिनीहरूले मुक्तिको बाटो तिमीहरूलाई बताइरहेछन।
18 उसले यस्तो धेरै दिनसम्म गरी। यसले पावललाई दिक्क लाग्यो अनि यसैले उ फर्क्यो अनि त्यो आत्मालाई भन्यो, येशू ख्रीष्टको शक्तिले म तँलाई आज्ञा गर्छु, त्यस केटीबाट बाहिर निस्की! त्यो आत्मा लगत्तै बाहिर निस्क्यो।
20 पावल र सिलासलाई पक्रेर ल्याए अनि हाकिमहरूलाई भने, यी मानिसहरू यहूदी हुन्। यिनीहरूले हाम्रो शहरमा गडबडी गराईरहेछन्।
22 ... त्यहाँका हाकिमहरूले पावल र सिलासको लुगाहरू च्याती दिए र मानिसहरूलाई कुट्ने आदेश दिए।
23 तिनीहरूले पावल र सिलासलाई धेरैपल्ट कुट-पिट गरे अनि तिनीहरूलाई जेलमा थुने। जेलका अधिकारीलाई तिनीहरूले भने, यिनीहरूलाई खुबै होशियारी साथ पहरा दिनु!
28 तर पावल चिच्यायो, आफैलाई घात नगर। हामी सबै जना यहीं छौं।
30 त्यसपछि तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्यो अनि भन्यो, महोदयहरू! मुक्ति पाउनलाई मैले के गर्नु पर्ला?
31 तिनीहरूले उसलाई भने, प्रभु येशूमा विश्वास गर तब तिमी र तिम्रो घरका मानिसहरूले मुक्ति पाउनेछन्।
33 ... तुरन्तै जेल अधिकारी र उसका जम्मै कुटुम्बलाई बप्तिस्मा दिइयो।
34 ... उ र उसको कुटुम्बका सबै मानिसहरू अत्यन्तै खुशी भए किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका थिए।
4. 1 थिस्सलोनिकी 5: 5, 6, 16-18, 21, 28
28 हाम्रा परमप्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरू सबैमा रहोस्। आमेन।
क्रिस्चियनहरू गोप्य सौन्दर्य र वरदानमा रमाउँछन्, संसारबाट लुकेको, तर परमेश्वरलाई थाहा छ। आत्म-विस्मरण, शुद्धता, र स्नेह निरन्तर प्रार्थना हो। पेशा होइन अभ्यास गर्नुहोस्, विश्वास होइन, सर्वशक्तिमानताको कान र दाहिने हात प्राप्त गर्नुहोस् र तिनीहरूले निश्चित रूपमा असीम आशीर्वादहरू बोलाउँछन्।
भगवान प्रेम हो। के हामी उहाँलाई अझ बढी हुन सोध्न सक्छौं? भगवान बुद्धि हुनुहुन्छ। के हामी असीम मनलाई उसले पहिले नै नबुझेको कुनै पनि कुराको जानकारी दिन सक्छौं? के हामी पूर्णता परिवर्तन गर्ने आशा गर्छौं? के हामी खुल्ला झरनामा धेरैको लागि बिन्ती गर्छौं, जुन हामीले स्वीकार गर्नु भन्दा बढी बगिरहेको छ? अव्यक्त इच्छाले हामीलाई सबै अस्तित्व र आशिष्को स्रोतको नजिक ल्याउँछ।
के हामी पहिले नै प्राप्त भएको राम्रोको लागि साँच्चै कृतज्ञ छौं? त्यसोभए हामीले आफूसँग भएका आशिष्हरूको फाइदा उठाउनेछौं, र यसरी थप प्राप्त गर्न योग्य हुनेछौं। कृतज्ञता धन्यवादको मौखिक अभिव्यक्ति भन्दा धेरै हो। कार्यले भाषण भन्दा बढी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ।
यदि हामी जीवन, सत्य र प्रेमको लागि कृतघ्न छौं, र अझै पनि सबै आशिष्हरूको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं भने, हामी निष्ठाहीन छौं र हाम्रो मालिकले कपटीहरूमाथि कडा निन्दा गर्छौं। यस्तो अवस्थामा, ओठमा औँला राखेर हाम्रो आशीर्वादलाई सम्झनु एउटै स्वीकार्य प्रार्थना हो। जब हृदय ईश्वरीय सत्य र प्रेमबाट टाढा छ, हामी बाँझो जीवनको कृतज्ञता लुकाउन सक्दैनौं।
कसले मानव शान्तिको हानि महसुस गरेको छ जसले आध्यात्मिक आनन्दको लागि बलियो इच्छाहरू प्राप्त गरेको छैन? स्वर्गीय असल पछिको आकांक्षा हामीले बुद्धि र प्रेमको हो भनेर पत्ता लगाउनु अघि नै आउँछ। सांसारिक आशा र सुखहरू गुमाउँदा धेरै हृदयको आरोहण मार्ग उज्यालो हुन्छ। इन्द्रियको पीडाले हामीलाई चाँडै सूचित गर्दछ कि इन्द्रियको सुख नश्वर हो र त्यो आनन्द आध्यात्मिक हो।
यो सोच्नुहोस्, प्रिय पाठक, किनकि यसले तपाईंको आँखाबाट भाङ्ग्रा उठाउनेछ, र तपाईंले नरम पखेटा भएको ढुकुरलाई तपाईंमाथि झरेको देख्नुहुनेछ। धेरै परिस्थिति, जुन तपाईंको पीडाको भावनाले क्रोधित र पीडादायी ठान्छ, प्रेमले एक परीलाई अनजान मनोरञ्जन गर्न सक्छ।
यो अज्ञानता र गलत विश्वास हो, चीजहरूको भौतिक भावनामा आधारित, जसले आध्यात्मिक सुन्दरता र भलाइ लुकाउँछ। … यो क्रिश्चियन विज्ञानको सिद्धान्त हो: ईश्वरीय प्रेमलाई यसको प्रकटीकरण वा वस्तुबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन; त्यो आनन्दलाई दुःखमा परिणत गर्न सकिँदैन, किनकि दुःख आनन्दको मालिक होइन। कि असलले कहिल्यै खराबी उत्पन्न गर्न सक्दैन; त्यो कुराले कहिल्यै मन उत्पन्न गर्न सक्दैन र जीवनले मृत्युको परिणाम दिन्छ। सिद्ध मानिस - परमेश्वरद्वारा शासित, उहाँको सिद्ध सिद्धान्त - पापरहित र अनन्त छ।
जीवन आत्मनिर्भर छ भनेर हामी इन्कार गर्न सक्दैनौं, र हामीले आत्माको अनन्त सामंजस्यलाई कहिल्यै इन्कार गर्नु हुँदैन, केवल किनभने, नश्वर इन्द्रियहरूमा, त्यहाँ असहमति देखिन्छ। यो ईश्वरको हाम्रो अज्ञानता हो, ईश्वरीय सिद्धान्त, जसले स्पष्ट मतभेद उत्पन्न गर्दछ, र उहाँको सही समझले सद्भाव पुनर्स्थापित गर्दछ। सत्यले लम्बाइमा हामी सबैलाई आत्माको आनन्दको लागि भावनाको सुख र पीडाको आदानप्रदान गर्न बाध्य पार्छ।
पदार्थको दावीलाई अस्वीकार गर्नु भनेको आत्माको आनन्द, मानव स्वतन्त्रता र शरीरमाथिको अन्तिम विजयतर्फको ठूलो कदम हो।
स्वर्गमा जाने एउटा मात्र बाटो छ, सद्भाव, र ईश्वरीय विज्ञानमा ख्रीष्टले हामीलाई यो बाटो देखाउनुहुन्छ। राम्रो, ईश्वर र उहाँको प्रतिबिम्ब भन्दा जीवनको अर्को कुनै चेतना नहुनु, र इन्द्रियहरूको तथाकथित पीडा र आनन्द भन्दा उच्च हुनु हो।
हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिने कुरा भनेको अनुग्रहमा वृद्धिको लागि उत्कट इच्छाको प्रार्थना हो, धैर्यता, नम्रता, प्रेम र असल कामहरूमा व्यक्त गरिएको हो। हाम्रा गुरुको आज्ञा पालन गर्नु र उहाँको उदाहरण पछ्याउनु, उहाँप्रति हाम्रो उचित ऋण हो र उहाँले गर्नुभएका सबै कुराहरूका लागि हाम्रो कृतज्ञताको एकमात्र योग्य प्रमाण हो।
हामीले दैवी प्रकृतिलाई बुझेर र उहाँलाई बुझेर प्रेम गर्ने, भौतिकतामा लड्ने होइन, तर हाम्रा परमेश्वरको समृद्धिमा रमाइलो गर्ने अनुपातमा हामी आज्ञाकारी र पूजा गर्नेछौं।
जब मानव विचार एक चरणबाट सचेत पीडा र पीडाहीनता, दुःख र आनन्दको अर्को चरणमा परिवर्तन हुन्छ, - डरबाट आशा र विश्वासबाट समझमा, - दृश्यात्मक अभिव्यक्ति अन्ततः भौतिक भावनाद्वारा होइन, आत्माद्वारा शासित हुनेछ।
हामीलाई जीवनको नयाँपनमा ल्याएर आत्माको ईश्वरीय उर्जाको अनुभूति गरौं र कुनै नश्वर वा भौतिक शक्तिलाई नष्ट गर्न सक्षम भनी पहिचान गरौं। हामी ईश्वरीय "शक्तिहरू" को अधीनमा छौं भनेर रमाइलो गरौं।